Maitiro ekuisa iyo Deepin desktop mune yedu Gnu / linux kugovera | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani vhezheni yekuparadzirwa kweDainin yaita kuti vashandisi vazhinji vafarire nharaunda inopihwa nekuparadzira uye kunyange kuyedza kudzokorora chinhu chimwe chete pamatafura avo emunhu. Neraki icho hachisi chinhu chitsva uye vashandisi vashoma vakakwanisa kuburitsa iyo Deepin desktop kune akasiyana kugoverwa, asi zvinosuwisa havazi vese uye isu tinogona kungoisa mumishumo iyo ingave iri Ubuntu kana yakabva kwavari. Mune vamwe vanogona kushanda asi isu tinogona kuve nezvinetso zvakakomba kana zvimwe zvikumbiro zvinomira kushanda nemazvo.Kana tikasangana ichi chinodiwa, kuisirwa kweDepin desktop ichave iri nyore kwazvo. Kutanga isu tinofanirwa kuvhura terminal uye nekuwedzera iyo PPA repository, nekuti desktop yacho haisi mune yepamutemo reposvo, saka tinonyora zvinotevera:
Iye zvino tinofanira kudaro nyora zvinotevera kuti uise iyo Deepin desktop:
Paunenge uchiita aya maodhi, kuisirwa kwedesktop reDepin uye mapakeji ayo aanoda kuti ishandiswe ichatanga. Munguva yekumisikidza meseji ichaonekwa ichitibvunza isu sisitimu sisitimu yatinoda kushandisa. Deepin anoshandisa LightDM asi isu tinogona kuenderera tichishandisa GDM3 kana iri iyo yatiinayo, ese mamaneja echikamu anowirirana naDepin. Mushure meichi chikumbiro, iyo yekumisikidza sisitimu inopedzisa uye isu tichava neDepin desktop pakugovera kwedu, isu tinongoda kuimaka mumaneja wechikamu seye default desktop.
Deepin desktop dhizaini
Zvakadaro, kana isu tichida kutaridzika kwaDeepin, chimwe chinhu chichava chichiri kushayikwa kuti chifanane, uyu ndiwo mufananidzo wekugovera. Izvi zvinogona kugadziriswa zviri nyore nekuzviisa mukugovera kwedu, kweizvi isu tinovhura iyo terminal uye tinyorera zvinotevera:
Izvi zvichatipa iyo yakadzika dhizaini inokonzeresa desktop yakaenzana kana yakafanana neiyo inopihwa neiyo Deepin kugovera. Ehe, kunyangwe ichitaridzika kunge haina kufanana uye kana tikatsvaga Deepin, pamwe chinhu chakanakisa kuisa Deepin Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Maitiro ekuisa iyo Deepin desktop mune yedu Gnu / linux kugovera
Isu tinoda misi kuti tione kuti kunze kwezuva rairo mirau iripi kana zvasvika kune echinyorwa mode zvinhu.
Zvinoenderana nemufananidzo uripo, zvinoita kunge June 2018?
Ndinoda kuona runyorwa rwema desktops / kugovera izvo zviri zvepedyo chinhu kuWindows. Kubaya kaviri kuti udzorezve mafaira kunoratidzika kunge kuri kusarudza mumhuri yangu, sezvinoita kopi yekufambira mberi kubhawa yakavakirwa mubhatani repabhawa.
Hei, zvakanaka kuti iwe wakatora nguva yako kunyora izvi. Kana zvingave zvakanaka kuva nazvo seyakadzika kudaro, chinhu chega chekuti pane michina isina zviwanikwa zvinodiwa uye ivo vanorembera zvakanyanya ini ndine yakanaka kwazvo arcolinux nezvose asi inoshandisa yakawanda zviwanikwa uye muchina rinondisungirira. uye iri mune inoshanda mode kana ndikaiisa mune yakasarudzika modhi inovhura application uye inoita kunge iri stuckoooooooooo uye haina kunakidza. Ndatenda neruzivo. uye mberi
Pindura kune heber